Wefdigii DF oo Jabuuti gaarey & Maraykanka oo soo dhoweeyey kulanka Jabuuti | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Wefdigii DF oo Jabuuti gaarey & Maraykanka oo soo dhoweeyey kulanka Jabuuti
Wefdigii DF oo Jabuuti gaarey & Maraykanka oo soo dhoweeyey kulanka Jabuuti
(Jabuuti) 14 Juun 2020 – Waxaa iminka magaalada Jabuuti ka degey wefdigii uu hoggaaminayey MW Somalia ee ka koobnaa RW Khayrre, GB Mursal iyo xunbo kale oo sare.
Wefdigan ayaa halkaa u tegey kulan ay ku wada hadlayaan DF Somalia iyo Maamulka Somaliland, kaasoo aan qabsoomin muddo 4 sanadood ah.
Dhanka kale, Safaaradda Maraykanka ee magaalada Muqdisho ayaa soo dhoweysey kulankan ballaaran ee aadka loogu dheg taagayo.
“Waxaannu amaanaynaa hoggaanka ay muujiyeen MW Farmaajo iyo MW Muuse Biixi. Waxaan u mahad celinaynaa MW Geelle oo martigelinaya kulankan taariikhiga ah si la iskaga kaashado wixii u roon dadka Soomaaliyeed. Waxaan boorrinaynaa in Soomaalida oo dhami ka qayb gasho geeddi socodkan.” Ayuu u qornaa warku.
Previous articleRW Abiy Axmed oo Jabuuti gaarey & AJENDE aanad ogayn oo shirka lagu soo qaadayo + Sawirro
Next articleSAWIRRO: Kulanka Jabuuti oo durba la guda galay (Qodobbo xasaasi ah oo lagu kala aragti duwan yahay & waxa isbeddelkan keenay)